Avy aiza marina ny vehivavy? Any Champagne!
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Avy aiza marina ny vehivavy? Any Champagne!
Nosoratan'i H. Lepind taorian'ny E. Debat-Ponsan, 1886
Ny Champagne dia an'ny vehivavy, manomboka amin'ny tany sy ny voaloboka, hatramin'ny fermentation, tavoahangy ary fisotroana. Nanamarika i Marie Antoinette fa nanatsara ny vehivavy ny champagne ary nankafizin'ny Emperora Josephine an'i Ruinart izy, na dia tapaka aza ny famatsiana azy rehefa tsy nety nandoa ny faktiorany izy taorian'ny fisarahany. Odette Pol-Roger, BFF miaraka amin'i Sir Winston Churchill, efa nodimandry, dia nankamamy ny hakanton'i Odette sy ny hatsarany ary koa ny azy Champagne. Nomeny anarana aza ny soavaliny mpihazakazaka iray, ary namela toromarika izy fa hiara-hisakafo aminy i Odette rehefa any Paris izy. Rehefa maty i Churchill dia nasiana sisintany mainty ny marika Pol-Rogers ary voafidy ho fanomezam-boninahitra azy, Cuvee Sir Winston Churchill.
Great Champagne trano no naorin'ny vehivavy. Noraisin'i Madame Clicquot ny famokaram-boaloboky ny vadiny tsy nahomby, nivadika fandidiana an-tapitrisany dolara ary lasa vehivavy mpandraharaha iraisampirenena voalohany manerantany. Ny Mme Clicquot dia namorona ny rafi-pitondrana remuage (ny fitongilana tsikelikely sy ny fihodinan'ny tavoahangy anaovana ny divay ka mipetaka amin'ny vozona ny sediment, avy eo azo esorina tsara) izay mbola ampiasaina hatrany.
Mba hankalazana ny vehivavy sy ny Champagne, Blaine Ashley, New York Champagne Week Mpiorina, dia nanangona andiana vehivavy manan-kaja ao amin'ny indostrian'ny Champagne. Vakio ny lahatsoratra feno ao amin'ny divay.travel.